Review IPad Mini Claviar 7 Keyboard | Vaovao IPhone
Famerenana an-tsarimihetsika IPad Mini Claviar 7
Hatramin'ny nisehoan'ny iPad voalohany teo an-tsena, Noheveriko foana fa ilaina ny mampiasa klavier hahafahako manoratra lahatsoratra lava. Miankina amin'ny haben'ny fitaovana, ny asa dia mety ho mavesatra kokoa, noho ny lanjany, ny habeny ary ny halavany eo anelanelan'ny rantsan-tànantsika mandritra ny fihazonantsika ny iPad, raha tsy hoe manana sehatra hanohanana azy isika amin'izany fotoana izany, izay tsy azo atao foana . Tsy lazaina intsony ny habaka izay esorin'ny keyboard virtoaly amin'ny efijery.
Androany isika hiresaka Claviar 7, keyboard Bluetooth ho an'ny iPad Mini (Izy io koa dia mifanaraka amin'ny takelaka Android mitovy habe aminy, iPhone sy Smartphone amin'ny ankapobeny amin'ny iOS na Android) ary novokarin'i Promate. Ny claviar Claviar 7 dia tsy mampifanaraka. Tsy kitendry izay azontsika ampiasaina koa ho fonosana hitehirizana ilay fitaovana sy hitondrantsika azy arovana na aiza na aiza.
Hisy olona tsy hankasitraka an'io lafiny io, tahaka ny nanjo ahy tany am-piandohana, fa rehefa azonao ny hevitra hoe maninona, dia ankasitrahana. Mila manao ny marina ianao Raha mividy keyboard ho an'ny iPad isika dia tsy hampiasa azy io foana. Raha hizaha ny mailaka isika, handefa na haka sary, mandefasa teny vitsivitsy ao amin'ny Twitter, manahirana ny fananana fonony fitendry, satria tsy maintsy esorinay ilay fitaovana, esory ny kitendry / fonony, tahirizo ary hampiasa azy io avy eo . Etsy ankilany, raha manana kitendry tsy miankina isika, amin'ny alàlan'ny fanokafana ny kitapo izay itondrantsika ny iPad dia afaka manomboka miasa miaraka aminy isika. Raha tsy ianao dia iray amin'ireo mividy keyboard ary te hampiasa azy io na dia hanoratra bitsika tsotra aza.
6 Ny tombam-bidinay
Mazava be ny klavier, ka raha manana toerana malalaka ao anaty kitaponao hitondra azy foana ianao, dia tsy ho hitanao, 15 mm ny hateviny raha vao nofonosinay ilay fonony hoditra manarona azy. Izy io dia nopetahany takelaka hoditra kanto izay ahafahantsika manana karazana lectern hametrahana ny iPad hanombohana manoratra.
Marina fa ny lectern, izay mamela antsika hitongilana 45 degre fotsiny, Mety ho somary marefo ihany izany amin'ny voalohany, fa raha vao mahazo ilay izy ianao dia mametraka ny iPad amin'ny zavatra iray dia milamina tsara.raha mbola eo amin'ny faritra fisaka no misy azy. Ny Claviar 7 dia tsy azo ampiharina hampiasaina amin'ny feny rehefa mipetraka isika, satria tsy mety amin'ny iPad ny iPad, satria mitranga amin'ny kitendry Logitech izany.
Tahaka ny klavier ho an'ny fitaovana latsaky ny 8 santimetatra, satria tsy dia misy toerana malalaka, mora dia mora fa amin'ny voalohany dia manindry lakile roa miaraka isika na ilay eo akaikiny fotsiny, fa rehefa mandeha ny fotoana dia zatra ny habeny sy ny fanoratanao nefa tsy misy lesoka. Izy io dia manana fanalahidy natokana ho an'ny iOS izay azontsika idirana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Fn ahafahantsika manidy sy mamoha ilay fitaovana, mifehy ny famirapiratan'ny efijery, ary ny feo, manova ny fitenin'ny fitendry, mifehy ny mpilalao mozika.
Raha te hahalala ianao hitsin-dalana vitsivitsy momba ny karazana fitendry, afaka mandalo ianao ity lahatsoratr'i Luis mpiara-miasa amiko ity.
Mikasika ny fizakan-tena, ny mpanamboatra Nilaza i Promate fa maharitra 45 andro ny fampiasana azy tsy tapaka na 60 andro fiandrasana ny fitaovana., mitazona ny keyboard tsy hampiasaina rehefa tsy ampiasaintsika. Tokony holazaiko fa efa niaraka tamin'ny fitaovana nandritra ny roa herinandro aho, nanoratra isan'andro sy ny enta-mavesatra izay nentiko ary tsy voatery hitaky izany intsony aho izao. Miaraka amin'ny kitendry, misy tariby USB micro ahafahantsika mameno ny fitaovana amin'ny alàlan'ny port USB amin'ny solosaina, na dia mampiasa mpampitohy herinaratra aza isika dia ho haingana kokoa.
Fotoana fiomanana: 60 andro (eo ho eo)
Fotoana miasa: 45 ora
Fotoana famandrihana: 2 ~ 3 ora.
Votoatin'ny fonosana: Claviar 7, tariby charger USB Micro.
Fifanarahana: Takelaka 8 "rehetra
Ny lectern, raha tsy apetrakao tsara, dia mety ho aretin'andoha.
Ny anglisy ihany no misy ny fitendry.
Tsy manana tranga hitaterana ny iPad (araka ny tsiro na ny filàna).
Safidy ity hodinihina ity raha toa ka tsy te handany vola be ianao ary mitady kitendry Bluetooth ho an'ny iPad Mini. Ny kitendry Logitech dia matetika tsy mandeha ambanin'ny 90 euro (tafiditra ao amin'ny VAT) fa tsy ny claviar Claviar 7 Manana ny vidiny 59,90 euro (tafiditra ao amin'ny VAT) ary hitanao izany any amin'ny magazay. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny vokatra Mampanantena afaka mitsidika ny tranonkalany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Famerenana an-tsarimihetsika IPad Mini Claviar 7
OS X Yosemite: ny rafitra fiasa vaovao ho an'ny Mac
Fampiharana ara-bola hitazomana ny fandaniana